शेखरको प्रस्ताव : दक्षिण सिमानामा पर्खाल लगाउँ ! « Gajureal
शेखरको प्रस्ताव : दक्षिण सिमानामा पर्खाल लगाउँ !
प्रकाशित मिति: १० चैत्र २०७५, आईतवार ०३:०५
शेखर काका राजनिती गर्नु हुन्न तर राजनीति जान्नु हुन्छ । आफ्नो जिवन कालमा भएका सबै आन्दोलनलाई नजिकबाट हेर्नु भएको छ । समर्थन गर्नु भएको छ ।
२००७ साल, २०१५, २०३६, २०४६, २०६३ हुँदै २०७५ सालसम्म पुग्दा यसबीचमा उठेका अधिकांस राजनीतिक मुद्दाहरु टुङ्गीएका छन् । तर, जनताले व्यवहारमै अनुभुत गर्ने वातावरण बन्न नसकेको देखेर होला- काकाले आज मनको कुरा यसरी बताउनु भयो…
‘खै, मैले नबुझ्या हो कि नेताहरुले नसुन्या हुन्, थाहा छैन । रोग टाउकोमा लागेको छ, ओखती नाइटोमा दलेर हुन्छ ? देशले भोगेका धेरैभन्दा धेरै समस्याको जराे सिमा वारी होइन, सिमा पारी छ । किलो पनि उसैले गाड्छ, पिल्लर पनि उसैले सार्छ । गोली पनि उसैलै हान्छ, छोरी पनि उसैले तान्छ । राम्रा राम्रा आफै कटाउछ, कुहिया सड्या यता पठाउँछ । ‘हामी ओखती सम्झेर खान्छौं, त्यो बिष भई सकेको हुन्छ । मिति छउन्जेल पो औषधी, मिति गुज्रिएपछी बिष हो ! डेट एक्सपायर औषधी हामीलाई नै पठाउँछ ।
त्यतिमात्र हैन, हाम्रो देश मान्द्रो फिंजाए झै मेचीकाली लमतन्न सुतेको आकारमा छ । मान्द्रोको लम्बाई तिरको बीट अलि अलि, अलि अलि गर्दै धमिरा लागेझैं, माउले खाएझैं नजानिंदो ढंगले कुटुकुटु चपाई रहेको छ । हाम्रो देशभित्र हुने हतियारबन्द आतंकबादी गतिबिधिको श्रोत समेत उतै हो । एउटा द्वन्द टुङ्ग्यायो, अर्को प्रवर्धन गरिहाल्छ । द्वन्द्वको व्यापार न हो । आश्रय उसैले दिन्छ । बेरोजगारलाई दाम दिन्छ । माम पनि दिन्छ । ‘खाई लाई टुपी हल्लाई’को काम पाएपछि कस्ले छोड्छ !
आफ्नो बारीमा अर्काको गाई पस्छ, बालीनाली दाँई गर्छ भने बलियो बार बार्नु पर्छ । भाई नै पसेर फोर्छ, चोर्छ र सोहोर्छ भने के गर्ने थाहा छ ?, ‘ग्रेटवाल’ वाह ! सुन्दै गौरव लाग्छ । ‘गुर्खाज’ वालका नामले चर्चित बनाउँदै वारपार गर्नु पर्छ ।
(तस्वीर सभार: सामाजिक सन्जाल)
तर यो भन्न सजिलो गर्न गाह्रो छ ! चार आना जग्गा किनेर सिमाना छुट्याउन एक फिटको गारो लगाउँ भन्दा त सधै सँगै बस्नु पर्ने सुख: दु:खको साथी छिमेकीले समेत अण्ट सण्ट गरेर बबण्डर मच्चाउछ । झन् आफ्नो आवश्यकता अनुसार पस्न, बस्न, र डस्न पाउने, लडाकु बोलाउने र सडाउ पठाउने, इमान्दार पाले र कुहिया फलफूल र तरकारीवाले साट्ने स्वर्णिम अवसर गुमाउला र ? यसको उत्तरचाहीँ खोज्नु पर्छ । किनकी स्याललाई पैंचो दिएको कुखुरो फिर्ता गर्न गार्हो छ ।
सरकार इमान्दार भएर एउटा कोष खडा गरोस्, म कम्तीमा ५० हजार योगदान गर्छु । हरेक नेपालीले पैसा बर्साउने छन् । अभियानको नारा ‘मेची- काली लम्बेतान, गोर्खा पर्खाल हाम्रो सान’ मात्रीभुमी सम्झेर गरौं सबैले योगदान ! पर्खालको उद्घाटन पछि पासपोर्ट बोकेर जब नेपाल-भारत आवागमन हुन्छ – फाईदा त दुबै देशलाई हुन्छ । कसो ?